Haddii aad qabto TV Apple ah guriga, waxaad lama dhibayay doorashada ka muujinaya TV haboon ama filimada, si loo dilo isbuuc kasta, sababta oo ah waxay noqon kartaa mid ah khayraadka geeyo online dhexgeliyey YouTube, Netfilx, Hulu Plus, NBA TV, MLB. tv, WatchESPN, Disney Channel, Yahoo Screen, Bloomber, WWE Network, Taariikhda, ABC News iyo wixii la mid ah iyo sidoo kale ciyaaryahan isha geeyo maxalliga ah, oo tartan kula Roku, Amazon Naarta TV, Google TV, Android TV, Playstation 3/4, Madaxweyne Siilaanyo 360 / One iyo qaar ka mid ah hababka TV iyo ciyaartoyda Blu-ray smart gudaha shirkadaha sida Vizion, Sony. hubi sida ay u sii qulquli videos ka Mac in TV Apple halkan .
Sida aan ognahay waxaan ku qulquli karaan content ka itune maktabadda si Apple TV si toos ah via Mac ama ka qalabka macruufka in Apple TV la AirPlay. Si kastaba ha ahaatee, Windows PC ma Cudarada la AirPlay, waxaad leedahay ugu yaraan 2 fursadaha in ay sii qulquli videos ka PC in TV Apple.
1. Lugood Home Sharing
Home Sharing in Lugood kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto aad maktabadaha warbaahinta Lugood u dhaxeeya ilaa shan kombiyuutarada ee reerkaaga iyo ciyaaro aad content Lugood ee macruufka aad qalabka iyo Apple TV (jiilka 2aad ama ka dib).
Halkan waxa ku jira shuruudo dhawr ah:
a. isla network - hubiyo in dhammaan kuwa kumbiyuutarada iyo tv tufaax hoos shabakad isku
b. login la ID isla Apple (jiilka hal) ama kala duwan (jiilka laba ama ka dambe)
Tallaabada 1 , dejisan iyo rakibi Lugood leh nooca ugu dambeeya (12.0.1 waxaa laga heli karaa haatan.)
Tallaabada 2 , double guji Lugood furitaanka, tag File Home Sharing shid Home Sharing
Tallaabada 3 , talooyin magaca iyo lambarka sirta ah
Tallaabada 4 , guji "sameeyo"
Markaasuu ku biiro Apple TV, xirmaan TV Apple inay shaashadda weyn via adabtarada iyo xadhig HDMI, ka dibna tag Kombiyuutaro, halkaas oo muujin doontaa kumbiyuutarada Home Sharing aad mar hore u soo jeestay oo ku saabsan. Dooro mid aad rabto in aad sii qulquli. Hadda waxaad qulquli karaan faylasha video on PC in Apple TV oo muujinaya shaashadda weyn hadda.
Ogow, haddii aad soo celiso tallaabadaan ay 1-4 ku kala duwan kale afar kumbiyuutarada, waxaad sidoo kale la wadaagi karto ka kooban Lugood Library dhexeeya kumbiyuutarada kala duwan.
2. Stream la Wondershare Video Converter Ultimate
Wondershare Video Converter Ultimate Waa xal hal-stop si loogu badalo videos / download / edit, gubi in DVD iyo qulquli in TV, taas oo sii qulquli karaan wax video files on PC in Apple TV, Roku, Madaxweyne Siilaanyo, Playstation si toos ah ula dar-ku - Media Server, kaas oo kaliya laga heli karaa tan iyo Windows version 8.0.
Tallaabada 1 , dejisan iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate (Windows Version 8.0 ama ka dib).
Markaas waxaad heli doontaa 2 toobiye barnaamijyadooda ku saabsan pc, mid ka mid ah Wondershare Video Converter Ultimate (app ugu weyn), midna waa Media Server (app iyo Addoon).
Download version maxkamad free hoos ku qoran:
Tallaabada 2 , jiidi file ee pc aad rabto in aad sii qulquli si loogu badalo suuqa kala Arrintaasna app ugu weyn ka dibna riix badhanka Stream ee soo socda si loogu badalo soo socda.
Tallaabada 3 , markaas taasi app ugu weyn ee lagu ogaan doonaa dhammaan qalabka il taageeray sida Apple TV shabakadda isku si toos ah iyo tuso qaybta Stream.
Halkan waxaa ku qoran liiska oo dhan oo ay taageerayaan ku.
Fiiro gaar ah: hubi in aad mar hore shid qalab durduri hoos shabakad isku mid ah. Ha ogaadaan sida loo sameeyo TV Apple? Riix infograph this.
Talaabada 4 , Riix badhanka Stream ee geeska hoose ee saxda ah, waxaa boodi doonaa si Media Server si toos ah.
Fiiro gaar ah: waxaad ka boodi kartaa talaabo 1-3 oo furan Media toos Server inay sii qulquli video files haddii aad ogtahay Media Server si aad u wanaagsan, sababtoo ah file tani waa ka furmo suuqa loogu badalo, ka dibna waxa uu iska leh "Beddelaan" category in Server Media.
Talaabada 5 , guuraan aad mouse on this file, waxaad ka arki kartaa caaradda - Play on TV.
Bidix click in qulquli on TV si toos ah ama xaq guji si aad u hesho doorasho badan.
Tallaabada 6 , ka dib markii guji Play on TV oo hadda aad ku raaxaysan kartaa video shaashadda weyn.
Waxa kale oo aad xakamayn kartid loo maqli karo ee suuqa kala pop-up ah, taas oo ay gacanta ku fog ee shaashadda weyn, sida qabsato mugga, bedesho hanaanka ciyaareed ama ku boodaan si ay u dhacdo kale.
> Resource > Windows > Sida loo sii qulquli Video kasta oo ka PC in TV Apple